Profesoras | eactivo | Isbaanish soo guurey
Waxaa la asaasay sannadkii Palma by laba macalimiinta ee Spanish luuqadaha qalaad, Active ku dhashay Spain 2008, oo ah urur aan faa'iido doon ahayn iyadoo himiladu tahay in fududaynta dhexgalka dadka soo galeytiga ah ee our magaalada waxbarid ee Spain. Saddex sano ka dib, Active Spanish noqotaa portal ah oo lacag la'aan ah wax ku barayay Spanish isla ujeeddadaas: is-dhexgalka kaalmaysta baridda luqadda. Si tan loo sameeyo waxaad u baahan doontaa: layliyo abuuray noo, Tixraacyada ah boggaga kale ee la xiriira baridda ee Spain, si aad u barato oo ku saabsan adiga kuu gaar ah oo kugu xiraya boggag la macluumaad waxtar leh oo kaa caawin kara in aad maalin ka maalin khayraadka online.
Waxaan go'aansaday in aan soo galay xirfad this ee 1998 ka dib markii uu dhamaado kooraska ee macalinka reer Spain ee dadka ajnebiga ah International House Madrid. Isla sannadkaa waxa Waxaan u dhaqaaqay San Francisco oo halkaas ku ahaa in aan halkaas iga ambabbixisaan bilaabay, waxay ahayd wax fudud oo badan ka bartay.
Tan iyo markii ay 1998 ilaa hadda Waxaan fursad u helay inaan la baro Spanish ee Spain iyo dalalka kale ee. Sidaa darteed, waxaan u soo galeen xiriir la dhaqamada iyo habab ee waxbarasho oo kala duwan oo aan qabo in ay sii riyaaqaya xirfad this.
In 2005 i mudé Mallorca a, Waxaan ka shaqeeya waxaa ku jira ih Palma bilaabay oo la kulmay Bego_a. Waxaan wada shaqeeyeen saddex sano iyo, ku howl-gasha rabitaan noo ah si loo baadho jahooyinka mustaqbalkiisa ciyaareed cusub, in 2008 waxaan go'aansannay in aan abuurno NGO ah, Active Spain, si ay u caawiyaan in is-dhexgalka ee waddanka u soo guurey ee waxbarid ee Spain.
Sannad ka dib, qaddar i geeyey Hanoi (Vietnam) sidaas darteed waxaan lahaa in dib looga fikiro fikrad qabsadaa NGO Internet noo, medio que nos permitiría seguir trabajando desde la distancia. Natiijada geedi socodkan waxa weeye website hantida Spain. Waxaan rajeynayaa in aad ka heli waxay run ahaantii waxtar iyo gool naga sida urur ayaa la kulmay.
From ah 2011 I sii waday safraya, ku nool iyo barayay dal oo kala duwan. Muddo sanado ah aan u sii waday baridda iyo shaqeeya on website this, laakiin ayaan sidoo kale wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo dhiso website-yada iyo sida loo dalbado herremientas web ku yaboohaya in tayeyno waxbaridda iyo waxbarashada ardayda aan bartay.
Halkan waxaad leedahay laba kugu xiraya boggag aan gaarka ah, mid waa ka I blog sobre los países en donde he vivido y el otro es de mi web de baridda by Skype. Aad ayaan ugu faraxsanahay mashruucan cusub laakiin la E-firfircoon ahay sida aan loo helin jawaabo aad u wanaagsan, Waxaad dhan ku mahadsan!
In 1999 Aan ku sameeyey oo kooras tababar ah macalimiinta ee Spanish ah luuqadaha qalaad ee International House Barcelona. Waxaan u jecel yahay oo waxaan ka maalin ka mid ogaa in aan doonayo in aan baro Spain. In 2000 Waxaan u dhaqaaqay San Francisco oo waxaa baray muddo ku dhow labo sano.
In 2002 Waxaan si Spain yimid oo waxaan ka shaqeynayaa International House Palma waxa kale oo baraya Spanish bilaabay. Markii aan la kulmay Delia ee Palma 2005 si deg deg ah ku xirmaan, oo waxaan arkay in, ka sokow khibradaha qaybsiga, Isaga oo ku noolaa dibadda dalal badan oo xitaa isagoo ka shaqeeyay isku dugsi ee San Francisco, inkastoo xilliga kala duwan, lahaa aragti aad u la mid ah ku baraya Spanish oo la wadaago xamaasad isku mid ah iimaanka aynu qiranno.
Waxaa mahad iska leh farsamooyinka cusub, Waxaan hayaa xiriiri kuwaas sano in Delia ku noolaa Hanoi oo aan waligood joojiyay iyagoo wadaagaya fikradaha iyo mashaariicda. Waxaan aad ugu rajo weynahay in ay awoodaan in ay ku shaqeeyaan website tan iyo arko fulinta gool ah in nagu soo hor kacay si ay u abuuraan noo NGO 2008.